Ndị isi Apple na-ekwu okwu banyere gbagwojuru 1 dị ka "Stationlọ Ọrụ Redio Kasị Ukwuu Worldwa" | Esi m mac
Ndị isi Apple na-ekwu maka Beats 1 dị ka "ọdụ redio kachasị elu n'ụwa"
Otutu ndi isi ulo Apple, tinyere onye isi oche nke ngwa na ọdịnaya Robert Kondrktinyekwara onye isi ọdịnaya maka Apple Music Larry jackson, ekwuola na a Ajụjụ ọnụ nyere n'ọnụ ụzọ verge ọhụrụ hits si Apple si Music gụgharia ọrụ.
Ajụjụ ọnụ a nwere ike iri ụbọchị mgbe kụrụ site na rapper Drake, dị ka anyị kwuru ụbọchị ole na ole gara aga. Ekiri ihe mgbasa ozi Drake karịrị oge 300 nde n'izu mbụ nke mbipụta. Emere ihe nkiri a na Satọdee Machị 18 na mmemme OVO Sound Radio's Beats 1.
Dabere na Jackson, mmekọrịta nke dị n'etiti Apple na Drake akwụla ụgwọ, ebe ọ bụ ihe nkwado zuru oke maka akụkụ abụọ ahụ. "Anyị anọghị na-ele anya na ọ pụtara ihe ịga nke ọma" mana Drake na-enweta ihe ọ chọrọ n'aka Apple ma n'aka nke ya Drake na-enye Apple ihe ọ chọrọ. N'okwu Jimmy Iovine.
O nwetara echiche ahụ. na anyị na-dị nnọọ wuru na-akwado ihe ọ chọrọ gburugburu ya… na anyị amụtala ọtụtụ ihe na, na dum ụlọ ọrụ mụtara ọtụtụ ihe na na.
Iovine Jiri ọnụ ọgụgụ ndị o nwetara na redio ya na ngwụcha izu gara aga tụnyere ndị ha nwetara n’ọtụtụ ihe omume tiivi. Ruo taa, ọ bụrụla ihe ngosi kachasị elu edepụtara 1 na akụkọ ntolite.
N'aka nke ọzọ, Larry jackson kwuru na ọ na-ahụ Beats 1 dị ka "Largestlọ redio kacha ibu n'ụwa" Na nzaghachi nye gị, ha nwere obi abụọ na nhọrọ nke Apple họọrọ mgbe ha na-enye ọdịnaya gaa na Apple Music platform.
Apple ga-aga n'ihu n'ahịrị a dabere na ihe ịga nke ọma ya. Ikekwe usoro a nke igosipụta ọba egwu ga-abụ ụzọ maka ndị na-ese ihe na ndị na-emepụta ọdịnaya n'ọdịnihu.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » ọtụtụ » Ndị isi Apple na-ekwu maka Beats 1 dị ka "ọdụ redio kachasị elu n'ụwa"
Ee, Apple wepụtara iTunes 12.6 patch iji wepu bọtịnụ profaịlụ